Ndeupi Musiyano Pakati peMessage uye Meseji Meseji pane iPhone? - Iphone
itunes haina kuziva iphone
sei kubatanidza purinda kune iphone 6
iphone 6 uchishandisa yakawanda data
icloud rangu harisi kuzotsigira
isa iphone 5s mune dfu modhi
Ndeupi Musiyano Pakati peMessage neMeseji Meseji pane iPhone?
Pasi pechiso, iMessages uye mameseji mameseji akasiyana zvakasiyana, kunyangwe zvavo vari vaviri vachigara muMessage app pane yako iPhone. Ini ndinofunga zvakakosha kune wese muridzi we iPhone kuziva mutsauko uripakati pemeseji mameseji neMessages, nekuti iro ruzivo runogona kuve ne chakakosha kukanganisa pafoni yako bhiri.
Kugara uchitumira mameseji shandisa chirongwa chekutumira mameseji chaunotenga kuburikidza nemutakuri wako. Kune maviri marudzi emeseji mameseji:
SMS (Ipfupi Meseji Sevhisi): Iwo chaiwo mameseji atave tange tichishandisa kwemakore. Meseji dzeSMS dzinogumira kumavara zana nemakumi matanhatu uye dzinogona kungova nemavara chete.
MMS (Multimedia Messaging Service): MMS mameseji anowedzera kugona kwemavara mameseji, uye kutsigira kutumira mafoto, meseji dzakareba, uye zvimwe zvirimo.
Vatakuri vanoshandiswa kubhadharisa zvakawanda kutumira mameseji eMMS pane mameseji eSMS, uye vamwe vachiri kudaro. Mazuva ano, vatakuri vazhinji vanobhadharisa huwandu hwakaenzana hweSMS uye MMS mameseji uye vanoaverenga sechikamu cheimwe chete mameseji echirongwa.
iMessages akasiyana zvachose pane mameseji nekuti anoshandisa data kutumira mameseji, kwete iyo mameseji echirongwa iwe yaunotenga kuburikidza neyako isina waya inotakura.
Bhenefiti Yekushandisa iMessage
iMessage inoita yakawanda kwazvo kupfuura SMS kana MMS: iMessage inotsigira kutumira mafoto, mavhidhiyo, mafaera, nzvimbo, uye kuuraya kwemamwe marudzi edata uchishandisa Messages app.
iMessage inoshanda pamusoro peWi-Fi: Sezvaunogona kufungidzira, kutumira uye kugamuchira mafoto kana mavhidhiyo kunogona kushandisa yakawanda data, uye iwe unobhadharira iyo data uchishandisa neyako cellular data chirongwa. Kana iwe wakabatana neWi-Fi, unogona kutumira iMessages usingashandise data rako renhare kana hurongwa hwekutumira mameseji.
iMessage inokurumidza kupfuura SMS kana MMS: SMS uye MMS mameseji anotumirwa uchishandisa tekinoroji dzakasiyana pane yako iPhone inoshandisa kubatanidza kune internet. Unogona kutumira mapikicha uye mamwe mafaera mahombe nekukurumidza nekukurumidza uchishandisa iMessage pane zvaunogona kushandisa mameseji eMMS.
Iyo Imwe Dambudziko
iMessage inoshanda chete pakati Apple namano. Iwe unogona kutumira uye kugamuchira iMessages kubva kuPhones, iPads, iPods, uye Macs, asi kwete kubva kuApple mafoni, maPC, kana zvimwe zvigadzirwa. Kana iwe uri muboka mameseji nevanhu vasere uye munhu mumwe ane nhare yeApple, hurukuro yese inoshandisa mameseji eSMS kana eMMS - mhando yemeseji iyo munhu wese foni inokwanisa kuve nayo.
Maitiro Ekudzivirira Yakakura Foni Bhiri Nekuda kweMessage
Cellular data inodhura, uye vanhu vanondibvunza nezvazvo nguva dzese. Ndanyora chinyorwa nezve maitiro ekuziva kuti chii chiri kushandisa data pane yako iPhone , uye iMessage inogona kuve honzeri huru. Sezvo iMessage inogona kutumira mapikicha, mavhidhiyo, uye mamwe mafaera mahombe, iMessages inogona kudya kuburikidza neyako data data data nekukurumidza .
Rangarira izvi: Iyo iMessages yaunogamuchira inoshandisa yako data chirongwa zvakare. Edza kushandisa Wi-Fi zvakanyanya sezvinobvira kana iwe uri kutumira kana kugamuchira mijenya yemifananidzo kana mavhidhiyo uchishandisa Messages app.
Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kunzwisisa mutsauko uripo pakati peMessages uye mameseji. Kutenda nekuverenga, uye kana uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone, iyo Payette Pamberi Facebook Boka inzvimbo huru yekuwana rubatsiro.
Zvese zvakanakisa, uye yeuka kuzvibhadhara kumberi,
iphone iri kupisa nekutsvaira bhatiri